१ सय ४० हेक्टर जमीनको खेती नष्ट::Online News Portal from State No. 4
१ सय ४० हेक्टर जमीनको खेती नष्ट
बागलुङ, ८ भदौं- गत साउन महिनामा आएको बर्षात, बाढी र पहिरोको कारण जिल्लाको १ सय ४० हेक्टर जमिन नष्ट भएको छ । साथै उक्त जमिनमा लगाइएको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल नष्ट भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालयले सबै सेवा केन्द्रका प्रमुख र कार्यालयका कर्मचारीको बैठकले उक्त क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी बिप्लब अधिकारीले बताए ।
साउन १० गतेको बाढी पहिरो बढी क्षति पु¥याएको थियो भने साउन भरीको बाढी पहिरो, हावा हुरी समेतले थप क्षति पुगेको हो । उक्त समयमा सबैभन्दा धेरै क्षति अधिकारीचौर गाविसमा पुगेको थियो भने बोहरागाउँ, निसी, बुर्तिवाङ, खुंगा, खुंखानी लगायत गाविसमा पनि क्षति पुगेको हो । साथै नारायणस्थान गाविस, रेश, लगायत स्थानमा पनि सडकको कारण पहिरो खस्दा बालीमा क्षति पुगेको पाइएको हो ।
करोडौंको क्षति पुगेकोले किसानलाइ राहत दिनका लागि जिल्ला र केन्द्रीय तहमा माग गरी पठाउने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए । बाढी पहिरोले धान, मकै, कोदो, तरकारी र किसानको घर तथा पशुबस्तुमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ ।
उक्त समयमै आएको हावा हुरीले मकैबाली नष्ट गरेको थियो । देविस्थान, रिघा लगायतका गाविसमा लाखौंको मकै समेत क्षति भएको हो । उक्त क्षतिले किसान निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरुलाइ बीउ, प्रविधि लगायतको सहयोग गरेर पुन पुरानै स्थानमा पु¥याउन पहल गरिने बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बिनोद हमालले बताए ।
राहत संकलन अभियान जारी
यसैबीच क्षति पुगेका स्थानमा राहत वितरणका लागि नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं. ३ का सभापति द्रोणराज कुँवरको पहलमा लाखौं रकम राहत संकलन भएको छ । उक्त अभियानमा सांसद बहादुर सिंह लामाले ५० थान त्रिपाल दिएका छन् ।
काठमाण्डौमा बस्ने बागलुङे र अन्यस्थानका बासिन्दाले हजारौं सहयोग गरेका हुन् । राहतका लागि टेकध्वज घर्तिमगरले ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैया, प्रबल थापाले २५ हजार सिंहराज लामाले २५ हजार, लाइफ इन्टरनेशनल म्यानपावरले १० हजार, दष पौडेलले १० हजार, रेशम भण्डारीले ८ हजार, शेखर केसीले ५ हजार, अबिनास कँवरले ५ हजार, भूमिराज सुन्चौरीले ५ हजार, कान्तिपुर ओभरसिजले ५ हजार, भिजन भ्यालु ओभरसिजले ५ हजार, निम्बस ओभरसिजले पनि ५ हजार सहयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै भिजन भ्याुल ओभरसिजले ५ हजार, निम्बस ओभरसिजको ५ हजार, कान्तिपुर म्यानपावरले ५ हजार सहयोग गरेका थिए । नरेन्द्र आचार्यले १० हजार, दिप छन्त्यालले ५ हजार, गणेश तामाङले १५ हजार सहयोग गरेको कुँवरले बताए । साथै थप हजारौं रुपैयाँ आएको सहयोग गाउँमै पुगेर वितरण गरिने कुँवरले बताए ।